သင့်ကလေးငယ်ရေနစ်နေကြောင်း သိသာစေမည့်အချက်များ နှင့် အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်နည်း - ONE DAILY MEDIA
သင့်ကလေးငယ်ရေနစ်နေကြောင်း သိသာစေမည့်အချက်များ နှင့် အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်နည်း
ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ကာကွယ်ရေး စင်တာများမှ ရရှိသော အချက်အလက်များအရ ရေနစ်ခြင်းဟာ အသက် 1-14 နှစ်ကြား ကလေးများတွင် သေဆုံးရခြင်း၏ ဒုတိယအဖြစ်များဆုံးကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ် ။ မိဘအများစုသည် ရေနစ်ခြင်း၏လက္ခဏာများကို ကောင်းစွာမသိကြတာမျိူ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်များ၊ ကြော်ငြာများနှင့် အခြားသတင်းရင်းမြစ်များက ဖန်တီးထားသည့် ဖျော်ဖြေမှုများကို ယုံကြည်လွန်ကြခြင်းက ၎င်းတို့ချစ်ခင်ရသူများကို အန္တရာယ်ကျရောက်စေနိုင်တာ သတိပြုရပါမယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကလေးတစ်ဦး အန္တရာယ်ရှိနေကြောင်း အချက်ပြမှုများကို ဖော်ပြပေးမှာ ဖြစ်တာကြောင့် သင့်အ‌ေနနဲ့ မှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး အရေးပေါ်ကို ကာကွယ်နိုင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။
Frank Pia သည် ရေနစ်သေဆုံးသည့် အပြုအမူများကို လေ့လာပြီး တွေ့ရှိချက်များကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် အမေရိကန် အသက်ကယ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ရေနစ်နေသူသည် ရေနစ်နေကြောင်း ကြော်ငြာနိုင်ခြင်း မရှိသလို မျက်လုံးမှတပါး မည်သူကိုမျှ မပြနိုင်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ။ ဤသည်မှာ မြန်ဆန်ပြီး များသောအားဖြင့် အသံတိတ် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ဖော်ပြပါများသည် ကျွန်ုပ်တို့ သတိထားသင့်သည့် လက္ခဏာများဖြစ်ပါတယ်။
(၁) အကူအညီတောင်းခံမှုနှင့် အသက်ရှူခြင်း
ကံမကောင်းစွာပဲ ရေနစ်ခြင်းဟာ လူအများအပြား ရဲ့ အာရုံကို ဆွဲဆောင်မယ့် တုန်လှုပ်ချောက်ချားမှု သို့မဟုတ် အကူအညီတောင်းရန် ဖိတ်ခေါ်မှုမဟုတ်ပါ။ တကယ်တော့ ရေနစ်နေသူဟာ စကားတစ်ခွန်းတောင် မပြောနိုင်ပါဘူး။ အလွန်အန္တရာယ်များသောအချိန်များဖြစ်ကာအသက်ရှုရန် ရုန်းကန်နေရသည်ကို တွေ့ရှိရပါတယ်။။ ထို့ကြောင့် သင့်ကလေးများကို စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ကူညီနိုင်မည်ဟု ထင်မြင်ခြင်းသည် ကြီးမားသောပေါ့ဆမှုဖြစ်ပါတယ်။
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ရေနစ်သူ၏ဦးခေါင်းကို ရေပေါ်တွင်ထားရန်မှာ အဓိကဖြစ်ပါတယ် ။ ထို့ကြောင့် လက်များကို ဘေးနှစ်ဖက်သို့ ဆန့်ထားပြီး အပေါ်နှင့်အောက် အလှည့်ကျ လှုပ်ရှားကြသည်။ ယင်းကဲ့သို့ လှုပ်ရှားမှုများသည် ရေနစ်နေသူကို ရေထဲတွင် အချိန်အတန်ကြာ နေနိုင်ရန် ကူညီပေးသောကြောင့် သူတို့ လေဝင်လေထွက်ရနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်များသည် အချိန်အကြာကြီး လုပ်ဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်ပဲ များစွာအားစိုက်ထုတ်နိုင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း သတိရပါ။
ရေနစ်နေသူ၏ ခန္ဓာကိုယ်သည် ဒေါင်လိုက်အနေအထားတွင် ရှိနေပြီး မည်သည့် ထောက်ကန်မှုမှ မပေးနိုင်ပါဘူး။ ကြာလာသည်နှင့်အမျှ လူ၏ဦးခေါင်းသည် 20 စက္ကန့်မှ 60 စက္ကန့်အတွင်း ရေထဲ နိမ့်ဆင်းသွားပါလိမ့်မယ်။
လူတို့ဟာ ကမ်းဘက်သို့ လှည့်လေ့ရှိကြောင်း တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါက သူတို့လုပ်နိုင်တဲ့ တစ်ခုတည်းသော လှုပ်ရှားမှုပါ။ ဖရိုဖရဲဖြစ်နေသော လက်လှုပ်ရှားမှုများနှင့် ခြေထောက်လှုပ်ရှားမှုမရှိခြင်းသည် လူတစ်ဦးအား မည်သည့်လမ်းကြောင်းကိုမှ တွန်းမပို့နိုင်ပါ။ အဆုံးတွင်၊ ဦးခေါင်း သို့မဟုတ် လက်များကိုသာ မြင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ဖော်ပြပါ လက္ခဏာများက သင့်ကလေးသည် အန္တရာယ်ရှိကြောင်း ပြသနိုင်ပါတယ်။
– သတိမရှိသော သို့မဟုတ် ပိတ်ထားသော မျက်လုံးများ
– အသက်ရှူမြန်ခြင်း သို့မဟုတ် ဟောဟဲဖြစ်နေခြင်း
– အရေးပေါ်အနေဖြင့် ဘာလုပ်နိုင်မလဲ?
ဤသည်မှာ အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်နေပြီဆိုလျှင် လုပ်ဆောင်ရမည့်စာရင်းဖြစ်ပါတယ်
– သင့်ကလေးကို ရေထဲမှထုတ်ပါ။
– ကလေးအသက်ရှုနေသလား စစ်ဆေးပါ။ အသက်ရှုသည့် လက္ခဏာ မတွေ့ပါက၊ နှလုံးပြန်နှိုးခြင်း (CPR) ကို ချက်ချင်း စတင်သင့်ပါတယ်။ ကလေးအသက်ရှူပါက နီးစပ်ရာဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်၍ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ စစ်ဆေးပါ။
– သင့်အနီးအနားမှာ အခြားတစ်ယောက်ယောက်ရှိနေရင် သူတို့ကို 911 ကိုခေါ်ခိုင်းပါ။
– သင်တစ်ယောက်ရှိတည်းနေတယ်ဆိုရင် ကလေးက သူ့ဘာသာသူ အသက် မရှူမမချင်း CPR ကို အာရုံစိုက်ပါ။ ပြီးရင် 911 ကိုခေါ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏သားသမီးများကို လုံခြုံစေရန် ကျွန်ုပ်တို့ ဘာလုပ်နိုင်သနည်း ?? Safe Water Kids အဖွဲ့အစည်းက သင့်အား နွေရာသီ သို့မဟုတ် အားလပ်ရက်ကို စိတ်ဖိစီးမှုကင်းစွာ ဖြတ်သန်းနိုင်စေမည့် အရေးကြီးသော အကြံပြုချက်များကို မျှဝေ‌ ပေးတာဖြစ်ပါတယ် ။
-ကလေးတွေကို ရေထဲမှာ ဒါမှမဟုတ် ရေအနီးမှာ တစ်ယောက်တည်း မထားခဲ့ပါနဲ့။ စက္ကန့်နဲ့အမျှ အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်တာကြောင့် အာရုံစိုက်ပါ။
-စောင့်ကြည့်သူကိုရွေးချယ်ပါ။ သူငယ်ချင်းများနှင့် အပန်းဖြေသွားပါက အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ရေထဲတွင် သို့မဟုတ် အနီးတွင် ကလေးများကို ကြည့်ရှုမည့် သူကိုတာဝန်ပေးပါ။
-ကလေးတွေကို ရေကူးနည်းသင်ပေးပါ။၎င်းတို့၏ အသက်အရွယ်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဆင်ခြင်ပါ။ ရေမကူးနိုင်တဲ့ ကလေးတွေကို အသက်ကယ်အင်္ကျီ ၀တ်ထားဝာာ သေချာပါစေ။
-ရေကူးကန်ထဲတွင် ရေကူးခြင်းနှင့် ရေရှင်တွင် ရေကူးခြင်းမတူညီကြောင်း ကလေးများအား သင်ပေးပါ။ အကန့်အသတ်ရှိသော မြင်နိုင်စွမ်း၊ အတိမ်အနက်၊ မညီညာသော မျက်နှာပြင်များ၊ ရေစီးကြောင်းများနှင့် undertow အကြောင်းကို သတိထားပါ။
-အခြေခံ ကယ်တင်ရေး ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် CPR ကို လေ့လာပါ။ ဒီအသိပညာက သင့်အသက်ကို တစ်နေ့မှာ ကယ်တင်နိုင်ပါတယ်။ အရေးပေါ်အခြေအနေမှာ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ မဖြစ်အောင် သတိထားဖို့ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။
ရေနစ်နေသူကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာမှာ ကူညီနိုင်တဲ့ တခြားလက္ခဏာတွေကို သင်သိပါသလား။ သင့်ကလေးတွေကို ရေအနီးမှာ ဘယ်လို စောင့်ကြည့်ရမလဲဆိုတဲ့ အကြံပြုချက်တွေကို မျှဝေပေးနိုင်မလား။ သင့်အကြံဥာဏ်များကို မှတ်ချက်များတွင် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် မျှဝေခဲ့ပါ။
ဆံသားကိုပျက်စီးစေမည့် အမှတ်တမဲ့ အမူအကျင့် (၇) ခု
သင့်ကလေးငယ်များတစ်ကိုယ်တည်းအိပ်ရန် ကူညီပေးနိုင်သည့် စိတ်ပညာရှင်များ၏ အကြံပြုချက် (၇)ချက်
Dec 1, 2021 One Daily Media
ကလေးများအိပ်စက်ခြင်းကို ထိခိုက်စေသည့် မိဘများ လုပ်မိတတ်သော အမှား ၁၀ ချက်